TETIKASA ASARA-ADRA : Nanome fampitaovana ireo mpitao raharaha ao Betroka
Ankoatra ny fanohanana ny tantsaha amin’ny fampitomboana ny vokatra amin’ny alalan’ny fambolena ara-teknika, ny tetikasa Asara – Adra ihany koa dia manome fampitaovana ho an’ireo izay hita fa mila izany mba ho tohana ho an’ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana hatrany. 12 octobre 2017
Tsara marihana fa io tetikasa io dia vatsian’ny vondrona eropeana vola, izay hahafahany manatanteraka ireo hetsika samihafa sy ireo tohana rehetra hatao, indrindra any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy.
Manoloana izany àry dia fitaovana informatika toy ny solosaina, fitaovana fampiasa amin’ny birao hafa no natolotry ny tetikasa Asara – Adra ho an’ireo « Prestataire de service » na ireo antsoina hoe mpitao raharaha izay mikirakira sy mandrafitra ny antontan-taratasy rehetra miainga avy amin’ny filan’ireo tantsaha. Anisany nangatahana tohana manokana tamin’ny tetikasa mihitsy izy ireo mba ho fampiroboroboana ny asa famokarana ataony amin’ny alalan’ny famatsiam-bola, na fitaovana, na fiofanana.
Izao no natao dia ny hamaliana ny filàn’ny tantsaha any ambanivohitra momba ny antontan-taratasy izay ilaina amin’ny fambolena, sy ihany koa mba hamaliana ireo karazana fangatahana mba ho voavaly izay tiany hatao. Nohamafisina fa mihamatihanina kokoa ny fiasan’ireo mpitao raharaha rehefa mahazo fitaovana araka ny tokony ho izy tahaka izao.
Ankoatr’izay dia afaka mitahiry ireo toro sy antontan-kevitra ary angon-drakitra ihany koa ireo mpiasa vokatr’izao fampitaovana izao. Nanatrika sy nanome voninahitra ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ireo lehiben’ny sampan-draharaham-panjakana any an-toerana, notarihan’ny lehiben’ny distrika, ary nahitana ihany koa ny lefitry ny ben’ny tanàna ambonivohitra ao Betroka.